GရာမYearရာမနှစ်ကုန်ရောင်းမှုသည်ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်ပိုမိုများပြားပြီးပိုမိုကောင်းမွန်လာသည် - NAB Show News | 10 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » GရာမSaleရာမနှစ်ကုန်အရောင်းသည်ဒီဇင်ဘာ 10th တွင်ပိုမိုများပြားပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သည်
GရာမSaleရာမနှစ်ကုန်အရောင်းသည်ဒီဇင်ဘာ 10th တွင်ပိုမိုများပြားပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သည်
Portland, OR - နိုဝင်ဘာ 26၊ 2019 - နှစ်ပတ်အတွင်းတွင် အနီရောင်ဧရာ ယင်း၏နှစ်ကုန်ရောင်းအား, အစတင်ပါလိမ့်မယ် Red Giant ကိရိယာများအားလုံးအတွက်နှစ်စဉ် 24 နာရီနှစ်နာရီထုတ်လွှတ်ခြင်းဒီဇင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ 8၊ 00 မှ 11 သို့ 00 am PST (10: 2019 am EST) မှစတင်သည်။ 8 am PST (00: 11 am EST) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ 00, 11 ။ ယခုနှစ်ရောင်းအားသည်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ Red Giant Complete မှ ၀ ယ်ယူသူများသည်အယ်ဒီတာများ၊ လှုပ်ရှားသူဒီဇိုင်းပညာရှင်များနှင့် VFX အနုပညာရှင်များအားအနီရောင် Giant ကိရိယာများအားလုံးကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့် subscription ကိုဝယ်ယူကြလိမ့်မည် - Trapcode Suite, Magic Bullet Suite , စကြ ၀ ,ာ၊ VFX Suite နှင့် Shooter Suite တို့ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစတိုးရှိအရာအားလုံးကို 2019% လျှော့စျေးဖြင့်ရောင်းချလိမ့်မည်။
NOW ကကြည့်လိုက်ပါ: အနီရောင်Iရာမ 2019 နှစ်ကုန်ရောင်း
Win Red Giant Complete - တစ်နှစ်ပြည့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ
လာမည့်နှစ်ပတ်အတွင်းတွင် Red Giant သည် 12 နာရီတိုင်းအခမဲ့ဆော့ဝဲများကိုပေးလိမ့်မည်။ ရိုးရှင်းစွာလိုက်နာပါ @redgiantnews Twitter ပေါ်တွင် hashtag ကို အသုံးပြု၍ အထူးပြိုင်ပွဲတွစ်တာများကိုပြန်လည်တင်ပါ #RGYearEndSale Red Giant Complete တွင်တစ်နှစ်စာ subscription ရရှိရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနိုင်ရရန်အခွင့်အရေးအတွက် 12 နာရီတိုင်းတစ်ကြိမ်ထည့်ပါ။ ပြိုင်ပွဲတနင်္လာနေ့ဒီဇင်ဘာလဒီဇင်ဘာ 9, 2019၊6- 00 pm PST (9: 00 pm EST) တွင်အဆုံးသတ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတန်ချိန်များစွာရရှိရန်အတွက် 24 အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
Gရာမအနီရောင်ဖြစ်စေသည့်အရာအားလုံးအတွက် Big ကိုမည်သို့ကယ်တင်ရမည်နည်း
Black Friday နှင့် Cyber ​​တနင်္လာနေ့တွင် Red Giant Year End ရောင်းရန်အတွက်အထူးအစီအစဉ်များ၊ အစုံလိုက်ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအတွက်အထူးလျှော့စျေးများကိုဝယ်ယူပါ။ ဒီမှာစျေးဝယ်သူများသိသင့်တဲ့အရာအားလုံး
အနီရောင်ကုမ္ပဏီကြီးအပြီးအစီးမှ 50% *
ကျန်အရာအားလုံးမှ 30% *
ရောင်း အဖုံးများ ​ပညာရေးဆိုင်ရာစျေးနှုန်း * (၎င်းသည်ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများအတွက် 50% လျော့ထားပြီးဖြစ်သည်)
အဆိုပါ Volume အစီအစဉ် လိုင်စင်ငါးခုနှင့်အထက်ဝယ်ယူသူများအတွက်လည်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ *
12 တွင် 10 / 19 / 8: 00 am PST စတင်ရောင်းမည်
ရောင်းအားပြီးဆုံးသွားသည်။ 12 မှ 11 / 19 / 8: 00 am PST
အနီရောင်iantရာပြည့်စုံပုံမှန်အားဖြင့် $ 599 / နှစ်။ စျေးနှုန်းဖြင့်သာဝယ်ယူပါ: $ 299
Trapcode Suite 15ပုံမှန်အားဖြင့် $ 999 ။ ၎င်းကိုဒေါ်လာ 699 ဖြင့်သာရောင်းပါ
VFX Suite (အသစ်!): ပုံမှန်အားဖြင့် $ 999 ။ ၎င်းကိုဒေါ်လာ 699 ဖြင့်သာရောင်းပါ
မှော် Bullet Suite 13ပုံမှန်အားဖြင့် $ 899 ။ ၎င်းကိုဒေါ်လာ 629 ဖြင့်သာရောင်းပါ
PluralEyes 4ပုံမှန်အားဖြင့် $ 299 ။ ၎င်းကိုဒေါ်လာ 209 ဖြင့်သာရောင်းပါ
စကွဝဠာ*: များသောအားဖြင့် $ 199 / yr ။ ၎င်းကိုဒေါ်လာ 139 ဖြင့်သာရောင်းပါ
ဤဥပမာများမှာကျွန်ုပ်တို့ရောင်းသမျှအားလုံးရောင်းမည်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဤနေရာတွင်ရှိပါသည်။ အကူအညီအတွက်ဆက်သွယ်ပါ။ redgiant.com/support.
လိုင်စင်ငါးခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသော ၀ ယ်ခြင်းများလော
အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကျောင်း၊ သို့မဟုတ်လိုင်စင်ငါးခုနှင့်အထက်ဝယ်ယူသောတက္ကသိုလ်ဖြစ်လျှင် Red Giant သည် Red Giant Complete စာရင်းအသစ်များအတွက်အသံအတိုးအလျှော့စျေး * ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Volume အစီအစဉ်၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ဒီမှာ။ ကျေးဇူးပြု အသံအတိုးအကျယ်အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ အပြည့်အဝအသေးစိတျအဘို့။
* အရေးကြီးမှတ်စုများ -
ဤရောင်းချမှုသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသောနှစ်စဉ်ကြေးများနှင့်စကြဝandာ၏လစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုအသစ်များ၏သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုမပါ ၀ င်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Universe ၏နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကိုတစ်ခါမျှမပိုင်ဆိုင်ဖူးပါက၊
ပညာရေးဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူသူများ - ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သင့်ကြောင်းအထူးအကြံပြုလိုပါသည် ရောင်းမီပညာရေးဆိုင်ရာဝယ်အဖြစ် Pre-အရည်အချင်းပြည့်မီ.
အနီရောင် Pledge မျှဝယ်ယူမှုကူညီပြီးအတူဖောက်သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှအနီရောင်ဧရာရဲ့ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာအနီရောင် Pledge အာမခံချက်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ www.redgiant.com/company/red-pledge/.
Red Reviewရာမအပြည့်အဝမီဒီယာပြန်လည်သုံးသပ် Kit ကိုတောင်းဆိုပါ
Red Giant မှမည်သည့် tools သို့မဟုတ် product suite ကိုမဆိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မီဒီယာများကိုဖိတ်ကြားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်တောင်းခံရန် Cat Soroush သို့ဆက်သွယ်ပါ [အီးမေးလျ protected].
ဆိုက်ဘာမီဒီယာတီဗီသည် eSports Streaming အတွက် ATEM Constellation 8K ကိုအသုံးပြုသည် - ဇန်နဝါရီလ 15, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-11-26
ယခင်: ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် bandwidth စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် AWS Elemental MediaLive မှစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ Multiplexing ကိုပေးသည်။